မိုရာတာ အတွက် အပြတ်ပြောလိုက်တဲ့ နည်းပြ ၊ ဘာဆာ အတွက် ကစားလို့ရပြီ ဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဗက်စ် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
မိုရာတာ အတွက် အပြတ်ပြောလိုက်တဲ့ နည်းပြ ၊ ဘာဆာ အတွက် ကစားလို့ရပြီ ဖြစ်တဲ့ အဲလ်ဗက်စ် တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ အလွတ် ပြောင်းရွှေ့မှု နဲ့ အသင်းဆီ တကျော့ပြန်ရောက် လာတဲ့ ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒါနီ အဲလ်ဗက်စ် ကို အသင်းသား စာရင်းမှာ ထည့်သွင်း နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီည ကစားမယ့် ကိုပါဒယ်ရေး ဖလားပွဲမှာ ထည့်သွင်း ကစားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
နည်းပြ ရပ်ဖ် ရန်းနစ် က ဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆို ထားပေမယ့် ဒွန်နီ ဗန်ဒီဘိ ကတော့ ပွဲ ကစားရမှု အလွန် နည်းပါး နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ ဇန်နဝါရီမှာ ထွက်ခွာဖို့ ပိုမို စိတ်ဆန္ဒ ရှိနေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နောက်ခံလူ ထရစ်ပီယာ ကို ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ အပြီးမှာတော့ ( မကြာခင် ကြေညာဖွယ်ရှိ ) အာဆင်နယ် ကစားသမား ၄ ဦး ( အော်ဘားမီးယန်း ၊ ဟိုးဒင်း ၊ အယ်နေး ၊ အန်ကီတီယာ ) ကို ဆက်လက် ချဉ်းကပ် ဆွေးနွေး သွားဖို့ လုပ်ဆောင် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းကတော့ ပြင်သစ် နောက်ခံလူ ဆင်မြူရယ် အမ်တီတီ ကို နယူးကာဆယ် အသင်းထံ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် ထားတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ က ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ မိုရာတာ ဟာ ဒီဇန်နဝါရီမှာ အသင်းပြောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဗင်တပ် နည်းပြ အယ်လီဂရီ က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ ကွန်တီ ကတော့ ဟယ်ရီကိန်း ဟာ အသင်းရဲ့ စီမံကိန်း မှာ အဓိက ကျသူ အဖြစ် ပါဝင် နေရတာကို ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက် နေပြီး အခြား အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ကိစ္စ အကြောင်း စကား မစထားသေး ပါဘူးလို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ရဲ့ ဒိန်းမတ် ခံစစ်မှူး ခရစ်ရှန်ဆန် ကတော့ အသင်းနဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးဖို့ အစီအစဉ် မရှိတော့ဘဲ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရဲ့ အကို ဖြစ်သူ ရဲ့ အေဂျင်စီ နဲ့ ချိတ်ဆက် လိုက်တာကြောင့် နွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အလားအလာ ပိုမို များပြား လာတယ်လို့ သုံးသပ် လာခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကတော့ ဒီကလန် ရိုက်စ် ကို နွေရာသီမှာ ကြိုးစားမှု အဆင်မပြေ ခဲ့ပါက အရန် အနေနဲ့ ပြောင်းလဲ ပစ်မှတ် ထားနိုင်ဖို့ ဒုတိယ အစီအစဉ် တွေကို ပြုလုပ် နေပြီး ပြင်သစ် လူငယ်လေး Tchouameni ကို စောင့်ကြည် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ အင်္ဂလန် နောက်ခံလူဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန် ကတော့ အာဆင်နယ် အနေနဲ့ ရီးရဲ ဆိုဆီဒက် တိုက်စစ်မှူးလေး အလက်ဆန်းဒါး အိုင်ဆက် ကို နွေရာသီ မှာ အရ ခေါ်ယူ သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် လူငယ်လေး ဘာလိုဂန် ကတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းဆီ အငှား ထွက်ခွာဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး ကလပ် ဖလာမင်ဂိုကတော့ တိုက်စစ်မှူး ဂါဘရီရယ် ဘာဘိုဆာ ကို အငှား နဲ့ စေလွှတ်ဖို့ စိတ်ကူး မရှိကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာသမျှ အသင်းတွေကို အကြောင်းပြန်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ မန်စီးတီး ကို ၂-၁ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဒိုင် ဖြစ်သူ အပေါ် ကစားသမားတွေ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝိုင်းဝန်း စောဒက တက်ခဲ့မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး FA ရဲ့ စွဲချက်တင်မှု ကို ခံခဲ့ရကာ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရဖို့ ရှိလာတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
မနက်ဖြန်ညမှာ ကစားမယ့် အာဆင်နယ် – လီဗာပူး ကာရာဘောင် ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ ဟာ လီဗာပူး အသင်းအတွင်း ကိုဗစ် ကူးစက် ခံရမှု များပြား လာတာကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် လီဗာပူး ရဲ့ အန်ဖီးလ် ကွင်းမှာ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ ကစားမယ့် ပွဲဟာ ပထမ အကျော့ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားပြီး အီးမရိတ် မှာ ကစားမယ့် ပွဲကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှာ ပြန် အစားထိုး ကစားသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article ရော်နယ်ဒို ရောက်လာထဲက ဘရူနို ခြေစွမ်း မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အင်ဒီ ကိုးလ်
Next Article ကွန်တီကို ခြင်္သေ့ပြာတို့ အိပ်မက်ဆိုးတွေ ပေးလိုက်တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၂ – ၀ တော့တင်ဟမ် ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ ( Ratings )